Ciyaartooyda gobolka Sool oo u gudbay finaalaha koobka gobollada Puntland, 2009. – Radio Daljir
Diseembar 18, 2009 12:00 b 0
Garoowe, Dec 18 – Ciyaaryahanada gobolka Sool oo cidla diray xulka Mudug iyo koobka oo ay filayaan in ay qaadaan.
“Waanu qadaynaa ilaahay idinkii koobka” ayuu yidhi mid ka mid ah ciyaaryahanada gobolka Sool, isaga oo intaa ku daray in ay rajo weyn ka qabaan inay kooxda ku soo hadha cidla diri doonaan, koobkuna uu gacantooda ugu jiro.
Tartanka Kubadda cagta ee gobolada Puntland ayaa waxaa uu si dar dar leh uga socdaa garoonka kubadda cagta ee Mire Awaare ee magaalada Garoowe, kaas oo iminka galay wareegii afar-afarta ama semifinalka.
Waxaa maanta ciyaar xiiso leh oo ka mid ah qeybta afar-afarta ama semifinalka wada ciyaaray xulalka gobolada Mudug iyo Sool.
Abaare 3:30 galabnimo ee maanta ayaa ay si rasmi ah u bilaabatay ciyaartan dhex martay labadan Gobol, waxaanay ciyaar yahanada labada dhinac isku qaadeen weeraro ay ku heleen fursado badan, balse qeybtii hore ee ciyaarta ayaan suuro galin in wax gool ah lakala dhashado.
Waxaa loo gudbay qeybtii dambe ee ciyaarta, waxaanay halkoodii ka bilaabeen ciyaaryahanada labada kooxood weerar iyo weerar celis la isugu dayay in gool lagu kala dhaliyo, waxaana ay taasi u suuro gashay qaybtii dambe ee ciyaartu 25 daqiiqo markii ay socotay ka dib ciyaaryahanada xulka Gobolka Sool in ay la yimaadaan gool, uuna u saxiixo laacibka khadka dhexe C/salaam Jaamac Dhiidhiiyo.
Waxaa ay ciyaartu noqotay mid sii kululaata, islamarkaana ay ciyaaryanahada gobolka Mudug ay isku dayaan in ay mar uun soo taabtaan shabaqa kooxda Sool, laakiin uma aysan suurto galin; waxaana ay ciyaaru ku dhamaatay 1-0 oo ay guushu ku raacday, kuna soo baxay finaalaha xulka gobolka Sool.
Sool waxaa ay finaalaha ku sugeysaa gobollada Sanaag iyo Bari hadba kii soo baxda ciyaarta berri dhex mari doonta labadaasi gobol.
?Shacabka Puntland oo loogu baaqday in ay dhawraan xuquuqda dadka danyarta ah, lana shaqeeyaan ciidanka amniga.
Sooyaalka & Suugaanka abwaan Maxamed Jaamac Ilkacase – Deeq A. Diriye (Gobaad Multidisciplinary Journal of Somali Society I, 2007).